Majaajiliiste Ruush ah oo si yaab leh ugu Aqli Ciyaaray Wasiirka Arimaha Dibadda ee Britain. – Xeernews24
Majaajiliiste Ruush ah oo si yaab leh ugu Aqli Ciyaaray Wasiirka Arimaha Dibadda ee Britain.
25. Mai 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Codkan oo onlineka la galiyay ayaa laga maqli karaa wasiirka arrimaha dibadda ee Britain oo guusha doorashada ugu hambalyaynaya qofka soo wacay ka dibna sii wada oo kala hadlaya xidhiidhka Ruushka iyo UK, weerarkii kiimikada loo adeegsaday ee Salisbury ka dhacay iyo Suuriya.
Dawladda Britain ayaa sheegtay in baadhitaan lagu samayn doono sida ay u suuragashay in qofka taleefanka soo diray loogu gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda.
“Ma ahayn in arrintaasi dhacdo. Baadhitaan ayaa socda, si loo ogaado waxyaabaha la xidhiidha taleefanka, loona xaqiijin lahaa in aysan mardambe dhicin arrintaas oo kale”, ayay tidhi haweenay u hadashay xafiiska ra’iisulwasaaraha Britain ee NO 10.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/05/Boris.jpg 150 218 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-05-25 20:23:212018-05-25 20:23:21Majaajiliiste Ruush ah oo si yaab leh ugu Aqli Ciyaaray Wasiirka Arimaha Dibadda ee Britain.
Faah-faahin ku saabsan dagaalkii Tukaraq maanta oo khamiis ah dib uga curta... Saraakiisha Tigreega & Ergooyinkii dulmi-diid ee Soomaalida oo Si wayn...